Shina LED rindrina milina fanasan-damba mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED rindrina milina fanasan-damba
1. Fanjifana herinaratra ambany, matanjaka ary maharitra.
2. Ny famolavolana circuit tsy manam-paharoa amin'ny fanoherana herinaratra static dia miantoka ny fahamarinan'ny fampitandremana maivana amin'ny fiainana maharitra.
3. Lamaody sy endrika tsara tarehy ary endrika savonon-drano tsara indrindra.
4. TSY UV, tsy misy atahorana ny famoahana rakitra, TSY fandotoana, fiarovana ny tontolo iainana
5.70% -80% fitehirizana angovo
6. Mora mametraka sy mampiasa
LED rindrina washers
The tsotra, styldiah ary maoderina famolavolana dia ny hita vatana ny ny nentim-paharazana ary maoderina abaryonment. The luminaire dia nanao ny avo-hery aluminium, amin'ny anti-manimba tsikelikely elektrika karazana verinia ary electrostatic Mitifitra fitsaboana. Ho ela velona.
The aluminium trano loko fanovana 12W 18W 24W 30W 36W tsy tantera-drano IP65 ivelan'ny trano fahazavana RGB Linear LED rindrina milina fanasan-damba, Tsotra, styldiah ary maoderina famolavolana dia ny hita vatana ny fomban-drazana ary maoderinaity.The jiro dia nanao ny avo-hery aluminium, ny surface dia resdiatant ny harafesiny ary electrostatic Mitifitra, tena fanadiovana ary ela maharitra.
Buy LED rindrina milina fanasan-damba nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba LED rindrina milina fanasan-damba ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized LED rindrina milina fanasan-damba Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.